musha Europe Vatambi veBasketball Nikola Jokic Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Iyo Biography yaNikola Jokic inokuudza Chokwadi pamusoro pehuhu hwake hwehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, takagadzirira rwendo rwake kubva achiri mudiki, kusvika panguva yekuve nemukurumbira. Kuti uwedzere yako autobiography chishuwo, yekutarisa mubhedha kune yekumuka gallery - chidimbu chakajeka kuna Nikola Jokic's Bio.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye akasarudzika nyeredzi ane chimwe chinhu chakakosha chinomusiyanisa kubva kune dzimwe NBA superstars. Kunyangwe hazvo rumbidzo, vashoma chete vateveri vakauya vakapfupikisa vhezheni yake yeHupenyu nyaya. Takazvigadzirira uye pasina zvimwe ado, ngatitangei.
Nikola Jokic Childhood Nhau:
Kune ekutanga maBiography, ane zita rekuti 'The Joker'. Nikola Jokic akazvarwa pazuva re19th raFebruary 1995 kuna baba vake, Branislav Jokic uye amai vakafanana, kuSombor, guta riri muSerbia. Mutambi weSerbia bhasiketi ndemumwe wehama nhatu dzakaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Paakaberekwa, vakamupa zita rekuti 'Nikola' iro rinoshandurwa nechirungu zvichireva Nicholas. Kubva pamaonero echitendero, akaberekerwa mumhuri yevaKristu vechokwadi.
Sombor wekuzvarwa akakura semwana wemba yake. Iye ndiye wekupedzisira mwana akazvarwa kuvabereki vake, aine vakuru vaviri mukoma mafeni makuru eiyo basketball. Tarisa, Nikola pamwe nevakoma vake vakuru Strahinja Jokić naNemanja Jokić.
Sezvo akakwidziridzwa mutaundi diki kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSerbia, Nikola Jokic akapedza yakawanda yenguva inotapira akatasva mabhiza. Kare kumashure, basketball haina kumbobvira yabata fancy yake.
Pfungwa yezvemagumo ake yakauya zvakasikwa zvese nekuda kwekureba kwake. Kare kumashure, vabereki vaNikola Jokic vakavhiringidzika munzira yaakakura kureba zvakanyanya. Paaive achiri mudiki, vakaona kuti anogona kuita zvakanaka mubhasikiti, nekudaro achimunyengerera kuti aedze. Kare kumashure, Branislav achamuzvuzvurudza kuti atambe B-Bhora asi maererano nemwanakomana wake.
Nikola Jokic Mhuri Kubva:
Kugara muDenver pasi peNBA mutsara webasa hazvireve kuti anobva kuUS. Nikola ndewechizvarwa cheSlavic uye iye muSerbia wedzinza chena. Kubatsira ruzivo rwako pane ino chikamu, heino rondedzero inosimbisa yake yemhuri mavambo.
Nikola Jokic akatanga bhasiketi rake basa pakutanga uye haana kuchinjanisa naro kuita dzidzo yepamutemo. Pakutanga, amai vake nababa vakavimbisa kusvina kwemaawa kuti agone kuita basketball kunyangwe achiri kuchikoro.
Zvese zvakaitika mutaundi rekumusha kwake uye vabereki vaNikola Jokic vakave nechokwadi chekuti aive nedzidzo yake yese mudhorobha rake, Sombor. Sechiratidzo chebudiriro yake, chikoro chaakaenda ikozvino chinomukudza nechidimbu chake cheumhizha chakapendwa pamusuwo wavo.
Kana iwe usiri kuziva, chikoro chaNikola sezvakaratidzwa pamusoro apa "Dositej Obradović" mumhuri yake inogara - Sombor. Sill mutaundi rimwe chete, Nikola akaenda kuMechanical High Chikoro chedzidzo yake yepamusoro.
Nikola Jokic Untold Basketball Nhau:
Kunyangwe achiri kuchikoro, wechidiki achiri kuita basketball. Kwenguva zhinji, akawana zvega zvega zvekudzidzisa pamwe nehama yake yakura.
Pamakore gumi nematanhatu, Nikola akanzwa yave nguva yekutora ramangwana rake zvakanyanya. Akatanga hupenyu hwake hweBhasiketi wepamoyo panguva iyoyo nekubatana neBelgrade-based basketball timu.
Nikola Jokic Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Neruzivo rwekubhasikiti kwemuno kumba neshamwari uye hama, maSerbia zvishoma nezvishoma akazove nyanzvi nyanzvi yebhasikiti. Mwaka nemwaka, akakura mukukwirira uye akave akajairika nechikwata chake.
Muna 2015, Jokic akahwina mubairo weEdriatic League Top Prospect 'uye akakudzwa zvakaenzana seye' Leigi 'inonyanya kukosha Nyeredzi.
Nikola Jokic Kubudirira Nhau:
Rwendo rwake rweNBA rwakatanga musi wa 26 Chikumi 2014, mushure mekunge atorwa kuti ajoine iyo Denver Nuggets. Sezvakatarisirwa, haana kutambisa mwedzi achiratidza kukosha kwake. Imwe chete mwaka wakazotevera, akasarudzwa kuNBA Yese-Rookie Yekutanga Timu.
Muna 2017, akatanga kuhwina mibairo yeNBA. Muchokwadi, VashanuThirinhatu vakanyora iyo Nikola se imwe YeVakanakisa Vechidiki NBA Vatambi Vese Nguva. Mhedzisiro yebasa rake rakaoma akamuona achigadzira iro runyorwa rwekutanga All-Star uye All NBA Yekutanga Timu kusarudzwa. Pamusoro pazvose, kubatsira Denver Nuggets kumasemifinari emusangano chaive chiitiko chakakura kwazvo pabasa rake.
Sezvo ini ndinogadzira iyo Biography yaNikola Jokic, vateveri vanomuona achigovana zvakafanana, huzhinji hunhu hune LeBron James. Pasina kukahadzika, iye anoshamisa zvechokwadi B-bhora wizard ine muviri wakakura uye "maziso kumashure kwemusoro wake". Vamwe vese, kusanganisira vhidhiyo rezvaakaratidza pazasi, ikozvino nhoroondo.
Nezve Nikola Jokic Wife:
Iyo Denver Nuggets ngano yanga ichidanana nemudiwa wayo Natalija Mačešić kweanenge manomwe (7) makore (kubvira 2013). Neraki, hukama hwakanamwa, uye vese vakaroora musi wa 24 Gumiguru 2020 kumusha kwake, Sombor. Iwo waive mutambo wepachivande wakapindwa nevabereki vaNikola Jokic uye vashoma vemhuri. Kubva muchato, murume nemukadzi vanga vachigara vachifara.
Nikola Jokic Hupenyu Hwemhuri:
Asati aenda kuDenver, chizvarwa cheSombor akange asiri kure neimba yake. Kubva paudiki, baba vaNikola Jokic, amai uye mukoma nemunin'ina vakaramba vari mutsigiri wavo mukuru nevanovimba vepedyo kusvika zvino. Muchikamu chino chidiki, isu tinokuudza zvakawanda nezve nhengo yega yega.
Nezve Baba vaNikola Jokic:
Yake yekubudirira nyaya yaisazogoneka pasina rutsigiro rwaBaba vake, Branislav Jokic. Isu tinorangarira baba vepamusoro nekuda kwekufanoona kwekutsvaga tarenda remwanakomana wavo. Akatora danho rakashinga rekurera Nikola, aingova nemakore gumi chete. Zvisinei nebasa rekuzvipira, iyo NBA nyeredzi inochengetera yakakosha nguva kuna baba vake.
Nezve Amai vaNikola Jokic:
Greats mums vakaburitsa NBA ngano uye 'Iyo Joker' haisi yakasarudzika. Iwe, hatina zvakawanda mukati maro. Asi chinhu chimwe ndechechokwadi. Icho chokwadi chekuti Nikola akatora mushure mekuonekwa kwamai vake.
Nezve hama dzaNikola Jokic:
Kubva pahudiki hwavo, wekuSombor wekuzvarwa uye vakoma nevanin'ina vake vakaratidza pachena zvisungo zvine simba pakati pavo. Chokwadi ndechekuti, ivo havapatsanurike uye vakabatsira mukusimudzira basa rake nekutarisa. Vakoma vaNikola Jokic ndiNemanja Jokic naStrahinja Jokic, wedangwe.
Hupenyu Hwega hwaNikola Jokic:
Iye Murume weSimbi, kunyangwe iye zvino ari nyanzvi bhasiketi mutambi, ane chishuwo chakasimba chemujaho weBhiza. Paakabvunzwa zvaaizoita padivi nebasketball, mhinduro yake yakauya senge banger sezvo iye akati- 'akatsiga akachena.'
Kunyangwe zvaanoshuvira kuramba aine chimiro chakaderera, Jokic haana basa nekushandisa mari yake pamotokari. Akambotenga Jeep GMC Yukon, inoita madhora zviuru mazana matatu nemazana mashanu. Asi nei mota? Imhaka yekuti nzvimbo yemukati inokodzera kukwirira kwake 63,500 tsoka (7cm) Muchidimbu, anorarama hupenyu hune hutano.
Nikola Jokic's Net Kukosha uye Mubhadharo:
Kubva muna2020, tinofungidzira muhoro waNikola kunge uri pamadhora 29,542,010. Iye ndiye weNBA we23rd akabhadharwa zvakanyanya mutambi ane mambure anofungidzirwa kunge angangosvika madhora makumi matatu emamiriyoni sa30.
Nikola Jokic's Untold Chokwadi:
Aita ruramisiro kune Bio yake uye nhoroondo yehupenyu, zvakakosha kutaura mashoma echokwadi nezvemurume (Jokic) anomira akareba pakati Europe Basketball vatambi.
Chokwadi # 1: Haana kufarira Basketball pakutanga:
Zvinotyisa sezvazvinoratidzika, parutivi nekukwezvwa kuenda kubasketball kudzidziswa nababa vake, pagumi nematatu (13), akambomira zvachose kutamba. Izvi zvakauya nekuda kwekufarira kwake kumhanya bhiza. Pakutanga, Jokic akatochenesa matura apo achidzidzira kuve mutasvi webhiza.
Chokwadi # 2: Kamwe Akafutisa, kubva pashuga kusvika kune slam dunk!
Unoziva here? Jokic aive akafuta paakakura. Aive nekadumbu uye achida kutora zviwitsi. Kare kumashure, aigona kunwa zvakaringana 3 litita eCoke pazuva. Nekutenda, akasiya izvo. Iye zvino anorema huremu hwakaonda uye hushoma 113kg.
Chokwadi # 3: Dambudziko repanyama:
Pachikwata chake chekutanga chehunyanzvi, Jokic aisakwanisa kuita kana imwe-yekudzvanya. Yakave yakakomba zvekuti iyo kirabhu yaifanirwa kumuisa pachirongwa chakasiyana chesimba nemudzidzisi wega kuti avandudze muviri wake.
Chokwadi # 4: Kurarama kurota:
Chokwadi ndechekuti, haana kumbozvitenda kana nhau dzekunyorwa kwake muchikwata cheNBA dzakabuda. Achakarara, mukoma waJokic akamumutsa kuti vamuudze nhau dzakanaka. Fungidzira maitiro ake !! iye akangorembedza ndokuenderera mberi nekurara, achifunga kuti kwaive kurota kwese. Zvino, ona kuti ndiani ararama zviroto zvake.
Kutenda nekuzeya yedu vhezheni yaNikola Jokic's Biography. Pasina kupokana, mafeni anogara achimukoshesa seimwe yeiyo Akakura Kupfuura Murume MuNBA Nhoroondo. Zvichida hunhu uhwu hunoita kuti ataridzike chaizvo LeBron James.
Tichiri kutsvagisisa, tinoona kuti mhuri yakabatana kiyi yekubudirira kwenhengo yega yega. Kunyangwe aine shungu nemabhiza, baba vaNikola Jovic vakaona maari nyeredzi yeramangwana. Ndinofungidzira iwe unoziva zvakasara. Ndichiri kunyora iyi Bio, mukurumbira wake wave pedyo nekufananidza neyeSerbia tenesi mutambi Novak Djokovic.
Tinoda kuti iwe uite iro zuva nesu kune mamwe anonakidza biography chokwadi uye nyaya dzehucheche dzeEuropean Basketball Players. Kana iwe ukacherekedza chero kukanganisa mukutakura kwedu, tisvike isu. Zvikasadaro, tiudze zvaunofunga nezvaNikola muchikamu chekutaura. Chekupedzisira, kuti uwane pfupiso yeiyo Bio, shandisa yedu Wiki tafura pazasi.
Nikola Jokic's Bio-Dhata
Zita rizere: Nikola Jokic
Zita rekudanwa: Joker, Huchi Hukuru
Zuva rekuzvarwa: 19 yaFebruary, 1995
Nzvimbo yekuzvarirwa: Sombor, Serbia FR Yugoslavia
Basa: Basketball Player
Nhamba yeJersey: #15
Yazvino Kirabhu: Denver Nuggets
Nzvimbo: Center / Mberi mutambi
Dzidzo: Mechanical High Chikoro, Sombor muWest Backa (Serbia)
Baba: Branislav Jokic
Vanun'una: Strahinja Jokic naNemanja Jokic (Hama)
Mukadzi: Natalijia Mascesic
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Pisces
Net Worth: $ 30 mamirioni (CelebrityNetWorth 2020)
Muhoro: $ 29,542,010 (Spotrac 2019)
Chitendero: ChiKristu (Orthodox)
Hobbies: Nhabvu, polo yemvura uye mujaho wemujaho, Kutasva bhiza uchiona mavhidhiyo anonakidza, kuteerera mimhanzi
Social Media: Instagram (nikolajokicofficial), facebook (VMarinkovicOfficial) uye Twitter (JokicNikola15)
kukwirira: 7 '0 "(2.13 m)